के ‘रेम्बो’को सिरिज बन्ला त ? यस्तो छ कुरा | Screennepal
के ‘रेम्बो’को सिरिज बन्ला त ? यस्तो छ कुरा
२०७४, १९ चैत्र सोमबार १६:२४screennepalbollywood, feature0
काठमाडौं, १९ चैत (एजेन्सी) । फिल्म ‘रेम्बो’को हिन्दी रिमेकमा टाइगर श्राफलाई हेर्न दर्शक एक्साटेड छन् । पछिल्लो समाचार अनुसार यो फिल्म नबन्न पनि सक्छ । तर, निर्देशक सिद्धार्थ आनन्दले भने फिल्म बन्ने तर समय लाग्ने बताए ।
उनले भने, ‘फिल्ममा एकदमै धेरै एक्शन सीन भएकाले निर्माणमा केही बाधा आएको थियो । त्यसैले हाल यो फिल्मको ’ इसी कारण फिल्मको सुटिङ हाल रोकिएको छ ।’ उनले केही समयका लागि मात्र फिल्म रोकेको बताए । उनले भने, ‘समय ल्निासाथ सुटिङ सुरु हुन्छ ।’
निर्देशक आनन्दले भने, ‘जब म र टाइगर यस फिल्ममा काम गर्दै थियौं, त्यसैबेला यशराजको फिल्म आयो । पहिले मलाई यस फिल्ममा म्ख्य रोलमा ऋतिक ठिक लागेको थियो । टाइगरलाई मैले सेकेण्ड भूमिकामा सोचेको थिए । अर्को कुरा रेम्बोका लागि तयारी गर्न समय पनि चाहिएको थियो ।’
आनन्द जसरी पनि ‘रेम्बो’को सिरीज बनाउन चाहन्छन् । उनले फिल्मको सुटिङ २०१९ को अन्त्यमा सुरु भई २०२० मा रिलिज गर्ने सोच बनाएका छन् ।
आनन्दको पछिल्लो फिल्म ‘बैंग–बैंग’ थियो । त्यसअघि उनले ‘सलाम नमस्ते’, ‘तारा रम पम’, ‘बचना ए हसीनो’ र ‘अन्जाना–अन्जानी’ जस्ता रोमान्टिक फिल्म बनाएका थिए ।
Previous Postरोर्बट सोफिया हलिउड अभिनेतासँग डेटिङ (भिडियोसहित) Next Postकार जित्ने अवसर | खुल्यो ‘मिस नेशनल आईकन’को आवेदन